REPUBLICADAINIK | बागमतीमा कम्युनिस्टहरूलाई ‘फिटीफिटी’, नयाँ सरकारबारे के गर्दै छन् कांग्रेस नेता बानियाँ ? (अन्तर्वार्ता) - REPUBLICADAINIK
प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपाभित्रकै आन्तरिक किचलोको कारणले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपाका नेताहरूको बीचमा द्वन्द्व भएर अविश्वासको प्रस्ताव प्रवेश गरेको छ । अविश्वासको प्रस्तावनै प्रदेश सभामा टेबुल भएको थिएन ।
हामीले सभामुखलाई प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेर सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्छ, तटस्थ हुनुपर्छ, सहयोगीको भूमिकामा हुनुपर्छ भनेर सभामुखलाई दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई टेबुल गर्न लगाएका छौँ । टेबुल गरेपछि त्यो विषयलाई कसरी छलफलमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कुरा गरेका छौँ । छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउनको लागि पहल गर्नुपर्छ ।
भोटिङ प्रक्रिया गरेर त्यसलाई छिनोफानो गर्नुपर्छ । सभामुखले एक्कासि प्रदेश सभालाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुभएको छ । यो कुरा दुर्भाग्य हो । सभामुखलाई भनेका छौँ । राजनीतिक सहमतिमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सक्रियता र सभामुखको पहलामा बसेको बैठकको सहमतिलाई उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । यस्तो कार्य नगरियोस् । नेकपाभित्रको दुइटा पक्ष छ । एउटा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अष्टलक्ष्मी शाक्य र शालिकराम जमकट्टेलको पक्ष । अर्को रामेश्वर फुयाँल र रामेश्वर पाण्डे यी सबै पक्ष बसेर कुरा भएका छन् ।
कसरी प्रदेश सभा चलाउने भन्ने कुरामा सहमति भएको थियो । परिस्थितिलाई हेरेका थियौँ । अविश्वासको प्रस्तावमा केही गरौँला भन्दाभन्दै एक्कासि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो । सभामुखज्यूले संसदीय मर्यादा, सहमति र सल्लाहलाई दवाव पर्नुभयो । कुनै प्रेसर र दवावमा सभामुख जस्तो व्यक्ति पर्नु हुँदैन । सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्छ । प्रदेश सभालाई चाँडै बोलाएर अविश्वासको प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ ।
प्रदेश सभा खोल्नका लागि पनि कुराहरू भइरहेको छ । नेकपाभित्रको दुबै पक्षसँग पनि कुरा भएको छ । अविश्वासको प्रस्तावलाई एउटा ढंगले छलफल गरेर जानुपर्छ भनेका छौँ । सभामुखले माथिको परिस्थिति पनि संसद विघटनको निर्णय बदर भएर नयाँ प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ भन्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान पनि भएको अवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको परिस्थितिलाई हेरेर प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमा एउटा ढंगले चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनको लागि दुबै पक्षसँग छलफल गरेर फागुनको अन्तिम वा चैतको पहिलो हप्ताभित्र संसद बोलाएर टुंगो लगाउनुपर्छ ।
कांग्रेसको प्रदेश सभा संसदीय दलले परामर्श गरेर निर्णय गर्छौं । संसदीय दलको नेताको हैसियतले गैरजिम्मेवार कुरा भन्न मिल्दैन । सबै साथीहरूको परामर्श लिएर उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय दिएर निष्कर्षमा पु¥याउने छौँ । भोटिङको अवस्थामा जाने र अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने वा अर्को ढंगले कसरी जाने भनेर छलफल गरेरै हामी टुंग्याउँछौँ ।
नेता नेतृत्वले आ–आफ्नैभित्र कांग्रेसको विचारको प्रभाव भइरहन्छ । २००७ सालमा वीपी कोइरालाले सशस्त्र क्रान्ति गर्ने भन्नुभयो । सुवर्णशम्शेर राणाले राजासँग मिलेर जान भन्नुभयो । तैपनि सशस्त्र विद्रोह भयो । किशुनजीले अहिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । कांग्रेसभित्र त्यस बेला तीन वटा विचार थियो । संसद विघटनप्रति दुइटा विचार आएको छ । कांग्रेसले यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक गतिविधि हो भनेको थियो ।
संसद विघटनको कांग्रेसले वडा तहदेखिनै विरोध गरेको थियो । कांग्रेसले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ । चुनाव पनि कांग्रेसले फेस गर्छ । चुनावबाट भाग्दैन भन्ने निर्णय कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भएको छ । निर्वाचनमा जान तयार छौँ भनेका छौँ । प्रदेश सभाका विषयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलाले दिएको अभिव्यक्ति ‘कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड’ बिचार आउन सक्छ । सरकारबारेमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल बागमती प्रदेशले गरेको निर्णयनै अन्तिम हुन्छ ।
तपाईहरू मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग मिलेर सरकारमा जानु हुन्छ ?
तपाई मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा हुनुन्छ । उता, प्रतिनिधि सभाका लागि मंसिर वा पुसमा चुनाव हुने चर्चा चलिरहेको छ । त्यस बेला तपाई प्रदेशमा बस्नु हुन्छ वा केन्द्रको राजनीति गर्नु हुन्छ ? यदि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो भने तपाईले प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिनु हुन्छ वा दिनु हुँदैन ?
Published : Thursday, 2021 March 4, 12:37 pm